Milkiilaha Gaari UN-ka ay sheegeen in uu Muqdisho isku qarxinayo oo hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Milkiilaha Gaari UN-ka ay sheegeen in uu Muqdisho isku qarxinayo oo hadlay
Qoraal ka soo baxay dhawaan xafiiska Qarramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa looga digay dadweynaha reer Muqdisho in ay ka digtoonaadaan gaariga noociisu yahay Surf sumadiisuna tahay AH 2737 kaa oo laga yaabo in uu maalmaha soo socda isku qarxiyo magaalada Muqdisho.
Haddaba waxaa warbaahinta la hadlay oo ka soo muuqday Ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ciise Xaaji Cabdulle oo sheegay in uu isagu leeyahay gaariga ay soo bandhigeen UN-ka, islamarkaana wararkaasi yahay mid been abuur ah oo aan waxba ka jirin.
Ciise oo sidoo kale soo bandhigay gaariga iyo sumada ay ku sheegeen UN-ka ayaa ku eedeeyay in ay khatar galiyeen naftiisa iyo waliba hantidiisa isaga oo ka dalbaday magdhaw, waxaana uu intaa raaciyay in gaarigiisa uu geeyay xarunta CID lana baaray.
Sidoo kale waxaa isna warbaahinta la hadlay Cismaan Caraale Jeyte oo sheegay in uu yahay Nabaddoonka Ganacsadaha, is lamarkaana UNka ku eedeeyay in ay sii daayeen warar aan laga fiirsan oo been abuur ah.
Digniintan U-Nka ay dhawaan soo saareen ayaa imaneysa iyadoo maalmihii ugu danbeeyay magaalada Muqdisho ka dhacayeen qaraxyo qaarkood loo adeegaday gaadiid laga soo buuxiyay walxaha qarxa, ayna khasaaro geysteen.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo balan qaad muhiim ah u sameeyay Haweenka